Ciidamada itoobiya oo qabsanaya deegaano muhiim u ah TPLF. – XAMAR POST
Ciidamada Difaaca Itoobiya ayaa u muuqdo kuwo maalmihii ugu dambeysay horumar ka sameynayay dagaalka ay kula jiraan kooxaha fallaagada, waxaana wararka ay sheegayaan in ciidamada itoobiya ay qabsanayaan magaalooyin muhiim ah .
Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa hoggaaminaya ciidamada dalkiisa ee dagaalka kaga jira dhinaca Gobolka Canfarta. Ciidamada ayaana la sheegaya in deegaano hor leh ka qabsanayaan kooxahaasi.
Waxay sheegtay in TPLF ay qaadi doonto masuuliyadda, haddii uu hakad ku yimaado gargaarkii la gaarsiin jiray dadka gargaarka bani’aadanimo u baahan ee ku sugan Gobolka Tigrayga, bacdamaa ay isku dayayaan inay dib u soo caabiyaan Ciidamada Qaranka. Hubinti la’aan ku timaada marinkan ayay sheegtay inay dib u dhac ku keeni karto gargaarkii loo sii marin jiray dadka Tigrayga.
Guddiga doorashada Gobolladda waqooyi oo shaaca ka qaaday qabashada Doorashada16 kursi .